NIGERIA NA-ECHEGBU ONWE YA BANYERE UMU AGBOGHO NA SAUDI
Home https://isimbido.tv/ho-chunk-casino-hotel/ all slots online casino bonus explained
in Akuko Ala Anyi, AKUKO UWA, Ihe
Minista nke Mba Ọzọ, Mr Geoffrey Onyeama, na-echegbu onwe ya maka ọnụego ụmụ nwanyị Nigeria na-azụ ahịa ma dọba ha na Saudi Arabia maka mmanye mmanye ma rafee.
Onyeama kwuru na Abuja mgbe National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP), Director General, Dame Julie Okah-Donli, gwara ya okwu banyere nchoputa nke nyocha banyere umuaka Naijiria ka ha bugara na Saudi Arabia.
Onye ozi ahụ gosipụtara ihe ijuanya na esi ewepụ ndị ntorobịa Nigeria site na mba ahụ gaa Saudi Arabia dịka ịchọta ọrụ maka ha mana mana ha ejirila ha rụọ ọrụ mmanye, na-ata ahụhụ ma na-emegbu ya n’ụzọ mmekọahụ.
SARAKI KWURU NA O BUGHI ONYE NDÚ OHUU KACHASI NJO
Onyeama, onye kọwara ọnọdụ a dị ka onye nwere obi ụtọ, kwuru na Gọọmenti Etiti ga-edozi ihe metụtara holistically ma hụ njedebe nke egwu ahụ.
O kwuru na e nwere akụkọ nwere nnukwu nsogbu na mba na ndị na-eme ozi ahụ iji guzobe otu ndị nyocha na ya.
“Akụkọ ahụ gosipụtara na nke a bụ ezigbo ihe otiti, ọ dịkwa nnọọ ụba ugbu a na ọha mmadụ ma ọrụ NAPTIP na-arụ ọrụ dị ukwuu nke dị mma.
“Ịzụ ahịa mmadụ bụ maka ịzụ ahịa karịrị nke ọzọ dị ka akụkụ buru ibu nke ya karịa nsogbu anyị ma nke a bụ nchegbu nke Ministry of Foreign Affairs, anyị na-echegbu onwe anyị.
“Ọ dị mkpa ka anyị mee ka mba anyị na ndị anyị mara ma mee ka nsogbu ahụ dị nso n’ụlọ site na ahụmahụ onwe onye,” ka o kwuru.
O kwuru na ozi ahụ na-aga n’ihu na ndị MDAs na-enwe nzukọ ndị na-eje ozi oge niile iji lebara nsogbu ahụ anya ma dozie okwu a otu ugboro.
“Anyị chọrọ itinye usoro iji dozie esemokwu a, ọ bụ mpụ megide ụmụ mmadụ, ndị na-eto eto na-ata ahụhụ ma ọ bụghị ihe anyị ga-anabata.
DAURA RAARA BUHARI NYE SARAKI EKWU NA-ENYERE GI AKA IZA AJUJU NIILE
“Ma, a ga-eme mgbalị niile, na ọ dịghị ihe ga-egbochi ikpochapụ ụdị egwu a nke mba a na site na ihu ụwa,” ka o kwuru.
NAPTIP DG na nkowa ya gwara onye ozi ahụ na ihe karịrị ụmụ nwanyị 50 nọ na United Kingdom Saudi Arabia.
DG onye biara na otu n’ime ndi ahu ndi mmadu a zoputara na ndi otu ndi agha kwuru na onye oru ahu guzobere ya mgbe onye oru NAPTIP mechara mee mkpesa na ndi ntorobia nke mba a bu ndi ahia na Saudi.
“Anyị bịarutere ebe a na-eme mkpesa maka gị banyere ọnụego nke ndị na-eto eto anyị na-esi ná mba ahụ gaa Saudi Arabia dịka ịchọta ọrụ maka ha.
“E nwere oku sitere n’aka ndị a na-achọ ịbanye na Saudi, ndị na-ata ahụhụ ma jiri obiọma setịpụ otu ìgwè gụnyere ndị ọrụ NAPTIP na ozi ahụ iji gaa Saudi ma nyochaa
“Mgbe ìgwè ahụ gara Saudi Arabia, anyị zutere ihe karịrị ụmụ agbọghọ 50 bụ ndị a gbara ajụjụ ọnụ na a gwara anyị na e nwere ọtụtụ ụmụ agbọghọ ndị nọ n’akụkụ dịgasị iche iche nke Saudi Arabia.
“A kpọghachiri otu n’ime ndị ahụ, ọ nọkwa ebe a iji kọọrọ ya nsogbu ya,” ka o kwuru.
O kwuru na e nwere ọtụtụ ụmụ agbọghọ Nigeria bụ ndị na-arụ ọrụ na Saudi na-arụ ọrụ n’okpuru salve-dịka ọnọdụ dị n’ụlọ ndị mmadụ.
Dị ka ya si kwuo, ihe ka ọtụtụ n’ime ha na-edina, ọtụtụ n’ime ha na-arụ ọrụ awa 18 n’ime awa 24.
O kwuru na ọtụtụ n’ime ha mere ka ha hie ụra n’ọnọdụ dara ogbenye ma ghara ịkwụ ụgwọ dịka ihe ụlọ ọrụ na-azụ ahịa aghụghọ si kwere ha nkwa.
“E nwere nnukwu cartel nke na-arụ ọrụ na ndị embassies, bụ ndị nwetara visa maka ndị ahụ metụtara n’ihi na ndị nwere ezigbo ụlọ ọrụ anaghị enweta visa ngwa ngwa kamakwa ịzụ ahịa,” ka o kwuru.
Onye a na-ekpuchi ekpuchi mgbe ọ na-akọ banyere nsogbu ya na Saudi kwuru na otu enyi ya bi na Dubai gbara ya ụra ma jikọtara ya na nwanyị na Banex Plaza na Abuja.
Nwatakịrị nwanyị nke kwuru okwu n’asụsụ Bekee, ma o kpugheghị ihe ọ bụla e mere na ya kwuru na ya na ụmụ agbọghọ ndị ọzọ hapụrụ Saudi na 30 Ọkara, 2017 tupu NAPTIP napụtara ya site na Ngalaba nke Mba Ọzọ.
“Ọ malitere site na enyi nke kwuru na ọ bi na Dubai; ọ gwara m otu nwanyị na-elekọta ụmụ nwanyị na Abuja, m bi na Lagos na nke ikpeazụ kpọrọ m izute ya na Abuja
“Mgbe m bịara, a kpọọrọ m maka ụlọ ọgwụ na Dr Wada’s Hospital.
“Agụmakwụkwọ ahụ kwere nkwa na m ga-aga Saudi dị ka nwa agbọghọ ahịa ma na m ga-enweta ihe ruru N150, 000 n’ebe ahụ.
“E mechara mee ihe niile site na ya na mgbe anyị rutere Saudi, ọ bụ ihe dị iche iche, a nabatara paspọtụ m ma kwụsị ọrụ dịka enyemaka ụlọ.
O kwuru na mgbe ọnọdụ a na-apụghị ịgbagha agbagha, ọ kpọrọ nwanyị ahụ wee sị na ọ gaghị enwe ike ịnagide ma onye ọrụ ahụ kwuru na ya apụghị ịhapụ.
Dị ka onye ọrụ ahụ si kwuo, ọ ghaghị ịkwụ ụgwọ N1.7 nde tupu e nwee ike ịtọhapụ ya
“Ma ọ bụrụ na enweghị m ike ịkwụ ụgwọ, m ga-arụ ọrụ ruo afọ abụọ, ya mere, akpọtụrụ m otu onye nta akụkọ nke kpọtụrụ NAPTIP nke kpọtụrụ Ụlọ Ọrụ Embassy Nigeria site na Ministry of Foreign Affairs,” ka o kwuru.
Nwatakịrị nwanyị ahụ kwuru na ọ fọrọ nke nta ka ọ nwụọ tupu enyemaka enyere ya aka rịọrọ Gọọmenti Federal ka ọ bịa napụta ọtụtụ puku ụmụ nwanyị Naijiria tọrọ atọ na Saudi Arabia
“Achọrọ m ka gọọmenti nyere ụmụ agbọghọ ndị ọzọ aka na-esiri ike n’ihi na ọ dịghị mfe, ụmụ nwanyị Naijiria na-agafe hell na Saudi, enweghi ike ịrụ ọrụ na Nigeria ma ọ ka mma ịla azụ.
“Enwetara m ahụhụ n’ụzọ anụ ahụ n’ihi na onyeisi m na ụmụaka ya kụgburu m mgbe m kwuru na achọrọ m ịlaghachi na Nigeria.”
JAPAN: ABUO NWURU NA ODACHI HELIKOPTA NA GUNMA
Pingback: NRURU AKA: RIBADU DORO AKA NÁ NTI MEGIDE ONODU OJOO RURU ARU